Swaziland na-akwado maka Reed Dance 2017
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » Swaziland na-akwado maka Reed Dance 2017
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Alaeze nke Swaziland kachasị ememme ọdịbendị, nke a maara dị ka Umhlanga ma ọ bụ Reed Dance, ga-amalite site na 29 August na ụbọchị isi (Day 7) ga-eme na 4 nke Septemba. Jupụta na abụ na ịgba egwu, nke Eze na-aga, isi ụbọchị nke bụkwa ezumike ọha na eze na Swaziland, na-adọta ìgwè mmadụ si nso na ndị dị anya ime emume na ịkekọrịta na ememme niile.
Na ọdịnala nke malitere ọtụtụ narị afọ gara aga, ememe Reed Dance bụ ihe ịtụnanya. Ọ bụ n'ememe a ka ụmụ nwanyị na-alụbeghị nwanyị na ndị na-amụtaghị alaeze na-ewetara nne nwanyị eze ahịhịa amịpụtara ọhụrụ iji chebe ebe obibi ya. Site n'oge ruo n'oge, Eze ahụ na-eji ohere ahụ agbaa onye chọrọ ịlụ nwanyị ma ọ bụ Liphovela akwụkwọ n'ihu ọha.
Mgbe ụbọchị ụbọchị ahụ rutere, ụmụ agbọghọ si n'akụkụ nile nke Swaziland na gafere ókèala ya na-ezukọ na eze na Ludzidzini maka emume a dị oke mkpa. Mụ agbọghọ na-agbakọta n’ìgwè ma pụọ ​​n’akụkụ osimiri iji gbue ma chịkọta ahịhịa ndị toro ogologo, kee ha ma laghachi Ludzidzini, Royal Homestead dị na Lobamba. Ọtụtụ iri puku ụmụ agbọghọ, nke ndị eze nwanyị Swazi na-eduzi, na-enye oké osimiri nke agba ka ha na-agba egwu ma na-abụ abụ, na-eji mpako na-ebu ahịhịa amị ha egbutu.
Ndị bi na Alaeze a ugwu nwere oke ịhụ mba n'anya banyere ọdịnala ha ma soro na mmemme a bụ oge mpako na ihe ùgwù maka ezinụlọ niile.
Ihe ngosipụta nke ihe omume a bụ emume inye nnweta - otu n'ime nleba anya ọdịnala kachasị ukwuu na Africa. Mụ agbọghọ na-agbakọ na Ludzidzini yi uwe ọdịnala; uwe mwụda dị mkpụmkpụ na-acha odo odo nke nwere akwa dị iche iche na-ete egwu, na-abụ abụ ma na-eme ịdị n'otu nke ụmụ nwanyị nke Alaeze ahụ. Onye isi ya bụ Mswati lll ga-esonye n’ememme ndị a iji sọpụrụ ụmụ agbọghọ.
Na ngwụsị nke ụbọchị, ozugbo ụmụ agbọghọ niile gosipụtara ahịhịa amị amịpụtara ha, iwughachi Guma na-echebe (gburugburu okporo ahịhịa amị) gburugburu ebe obibi nke nne nwanyị Queen nwere ike ịmalite.
Ememme Umhlanga jikọrọ obere mba a zuru oke. Ndi o na-ewu ewu mgbe nile na-agbadata ngbachi d i ka omenaala odinala ebe o bula no n'Africa si di.
Gbara ememme a bụ ahụmịhe pụrụ iche n'ezie nke ngwakọta nke Swaziland nke ọdịnala oge ochie, ọzara dị egwu, afọ gburugburu anụ ọhịa na mmụọ nke njem!
Nnukwu ndị na-emefu ego na ọnwa mbu nke Phuket ...
Princess Cruises Australia: Agaghị agbadata n'okpuru ...